Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Arimaha Xuquuqul Insaanka oo Maanta Brusels Kafurmaya.
Shirkii Arimaha Xuquuqul Insaanka oo Maanta Brusels Kafurmaya.
Shir balaadhan oo lagaga hadlayo arimaha xuquuqul insaanka ayaa maanta oo Khamiis ah kafurmaya magaalada Brusels ee wadanka Belgem, waxaana shirka kasoo qayb galay mas’uuliyiin aad ubadan oo kakala socda wadamo kala kadisan iyo hay’ado caalami ah oo arimaha xuquuqul insaanka udooda.
Sidoo kale waxaa kulankan dhagaysan doona qaar kamid ah baarlamaanka midowga Yurub qaybta arimaha xuquuqul insaanka iyo waliba wakiilo kasocda dowlada Belgem iyo waliba aqoonyahano caan ah.
Kulanka waxaa khudbad balaadhan kasoo jeedin doonta HalgantoJawayriya Maxamed Biixi oo xog miisaan leh kabixin doonta arimaha xuquuqul insaanka ee wadanka Ogadenia iyo waliba dhibaatooyinka aan kala joogsiga lahayn ee ay lakulmaan shacabka lagumaysto ee Soomaalida Ogadenia.
Sidoo kale Halganto Jawayriya Maxamed ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigto cadaymo laxidhiidha tacadiyada joogtada ah ee ciidanka wayaanuhu ay kagaysanayaan dhulka Ogadenia.
Sidoo kale waxaa kulanka khudbad dheer kajeedin doonta Marwo Samia Cismaan oo kasocota qaybta xuquuqul insaanka ee shacabka Oromia, waxayna marwo Samiya sidoo kale keeni doontaa cadaymo laxidhiidha dhibaatada shacabka Oromada lagu hayo.
Sidoo kale waxaa kulanka khudbado laxidhiidha arimaha xuquuqul insaanka ee wadanka Itoobiya soojeedin doona khuburo caalami ah iyo waliba nin qoraa ah oo waxbadan kaqoray arimaha xuquuqul insaanka ee wadanka gumaysiga Itoobiya.
Taliska wayaanaha ayaa sanadihii udambeeyay wajahayay cambayrayn dhinaca xuquuqul insaanka ah, waxaana in badan kahadlay hay’adaha xuquuqda aadamaha udooda iyo waliba qaar kamid ah dowladaha aduunka.
Kulankan ayaa lagu wadaa in ay kasoo baxaan fikrado iyo talooyin wax ku ool ah kuwaas oo wax katari doona dadyowga lagumaysto iyo waliba gabood falada caalamka.
Kulanka iyo wixii kasoo baxa isha kuhay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA.